मिडिया एक घोटाला दिनुहोस्, एक राज्य सचिव (हर्बर्स) बलिदान: विश्वसनीयता मार्केट: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
यो मिडिया (राजनीतिका लागि विज्ञापनदाताहरू) र अभिनेता संघ द हेगको बीचमा अन्तरक्रियामा लोकप्रिय दासत्वको षड्यन्त्र पुनरावृत्ति हो। उपेक्षात्मक NRC पत्रकारहरु AZCs मा दुरुपयोग को बारे मा एक रिपोर्ट लाग्यो। यो प्रकट हुन्छ कि ती केन्द्रहरूमा धेरै मारिएका छन्। त्यसपछि त्यसपछि 'अन्य मामिलामा' शीर्षकमा लुकेको थियो र यसैले राज्य सचिव हर्बर्सले राजालाई आफ्नो इस्तीफा पेश गरेर नयाँ वास्तविक जीवन शो पूरा गर्न अनुमति दिए। के तपाईं यस साबुन साबुन को केहि केहि छ कि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अवश्य होइन।
तपाईं राजनीति र मिडियाको कथासँग सम्झौता गर्नु पर्छ। "तपाईं यस्तो जस्तै केहि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं छैनन, किन तपाइँ यसो गर्नुहुन्छ?" किनभने यो एक प्रचार उद्देश्य कार्य गर्दछ! ती शरणार्थीहरूको केन्द्रमा ती व्यक्तिहरू को हुन्? किन समाचारमा ठूलो भएको छैन, जस्तै थिज एच। जसले चालकको साथ धेरै कुकुर वाहकहरू समाते? के तपाइँ केही तस्बिरहरू चाहानुहुन्छ? त्यो पनि सबै माग मा व्यवस्थित हुन सक्छ (केवल एक कुरा गहिरो जेनरेटर खोल्नुहोस्)। यो हरेक दिन स्पष्ट हुँदैछ कि मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता हराइरहेको छ। एक आत्म-निर्मित दंगा हो त्यसपछि सधैं राम्रो काम गर्दछ। यो Wouter de Winther र उनको द्वारा शानदार काम छैन एनआरसी पत्रकारहरूको टोली?
आदर गर्ने योग्य हुनुहुन्छ, तर सबैले पत्रकार, आंकडा, रिपोर्टहरू, कथाहरू, तस्बिरहरू, तस्बिरहरू, राजनीतिज्ञहरूसँग साक्षात्कार, न्यायिक कर्मचारीहरू र त्यसमा विश्वासको वरिपरि घुमाउँछन्। तिनीहरू सबै झूटो हुँदैनन्, के तिनीहरू? सूची र धोखा कारखाना भित्र, सबै को उत्पादन उत्पादन र धोखाधड़ी मा निर्भर छ र यसैले सबै को सूची र छल को उत्पादन प्रक्रिया मा सहयोग गर्दछ। मेरो क्षमादान, तर म कुनै पनि हर्बर्सलाई विश्वास गर्दैन। राजनीति र मीडिया दुवै 'यस्तो दंगा'हेर, हामी साँच्चिकै महत्वपूर्ण छौं''हेर, हामी साँच्चै हाम्रो मासु निरीक्षण गर्न सक्छौं'and'हेर्नुहोस्, यदि केहि गलत हुन्छ भने हामी यसलाई स्वीकार्छौं र यसको बारे केहि गरौं"। हामी स्व-सफाई र लोकतान्त्रिक कार्य हौं, त्यसैले सन्देश हो। "मलाई विश्वास गर्नुहोस्! यो सत्य हो! ", डोनाल्ड टम्पले भन्थे। मरे हर्जर्सले एक सुन्दर बैंकमा धन्यवादको रूपमा कल गर्नेछ।
आजकल टेलीग्राफबाट अर्को सन्देश सार्थकता बढाउनको लागि 'Hipster جهहिदी'सीरिया अब्दुलजज ए। जसको यो अचानक स्वीकार भएको छ कि उनी एआईडीडी को सूचक थिए। यदि तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि कसैले केवल2वर्षको सूचक थियो र AIVD द्वारा केहि पटक भुक्तानी गरे, तपाइँले सम्भव छ कि कसैले सम्भवतः उनी सबैको जीवनमा एक सूचनाकार रहेको छ र सम्पूर्ण जिहादी सञ्जाल आफै गोपनीय सेवाहरूद्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
यस्तो समाचार वस्तुहरू सम्भवतः सबै मार्केटिंग स्पिनोकोटर कथाहरू हुन्। लीकिंग टायर मुहर को लागि टाँसन वाला। हवाले सबै छेदबाट सबै छेदहरू पनीर बेल्टबाट छुट्याउँछ र त्यसोभए प्रचार अभियान अति ओभर टाइम चलाउँछ। यो सम्भव छ कि यहाँ र त्यहाँ कुनै पनि निराश रिसेप्टरहरु को लागी AZCs, प्रहरी वा न्यायपालिकाका कर्मचारीहरू अब उनीहरूको मुख बन्द राख्न सक्दैनन्। हरेक अब र त्यसमा तपाइँलाई स्थिरता कोयम राख्न को लागी थोपाको लागी गर्नु पर्छ। किनकि त्यसो भए पनि त्यसो भए पनि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
हामीले AZC हरू भन्दा डरलाग्दो हत्यारा हत्यारा रहनु पर्छ र जहीदबाट भाग्नु पर्छ। यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ भने, यो समाजमा बायाँ र दाँया बीच तनाव वृद्धि गर्न सबै डरलाग्दो छ। नक्कली समाचारहरूको आकार यति धेरै भयो कि हामी हाम्रो 'वास्तविकता' को छवि लाई पूर्णतया मिडिया र राजनैतिक रुपमा रंगित रुपमा विश्वास गर्न आएको छ। यस्तो रिपोर्टिङको थप प्रभाव यो हो कि तपाइँ एक पटक फेरि महसुस गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ कुनैपनि ठाडो राजनीतिक कार्य हुनु पर्छ। यो फेरि मतदानको समय हो, त्यसैले सम्भवतः राजनीतिक पार्टी, बी वा सी तपाईले अर्को समस्या समाधान गर्नेछ। र यसैले सबै एक रातो लाल घुमाउन मतदान स्टेशनको दिशामा राम्रो तरिकाले हिंड्छ। लोकप्रिय detox मेशिन rumbles। आखिर, चुनाव फेरि आउँदैछ र थियरी बाउडेट र मार्क रुटका बीच बहस थप ईन्धन पाउनेछ। समाजमा आगोहरू फेरि फेरि पुनः सकिन्छ र जनताले लोकतान्त्रिक भ्रममा विश्वास गर्न जारी राख्छन्।
माथिको बेशक मेरो विचार हो र तपाईले यो टुक्रा चुपचाप पढ्नुपर्छ। यसमा वास्तविक जीवन पाठ छ: जीवनको पाठ
स्रोत लिङ्क सूची: pauw.bnnvara.nl, telegraaf.nl
ट्याग: asylum seekers, azc, तथ्याङ्कहरू, विशेष, लिइयो, हर्बर्स, पेश गरियो, journalisten, अपराध, हत्या, हत्या, NRC, खारेज, राज्य सचिव, Wouter de Winther
22 मई 2019 मा 10: 53
जस्तो कि नीदरल्याण्डका अधिकांश व्यक्तिलाई थाहा छ, हरेक कुरा यहाँ निर्देशित गरिएको छ, निश्चित रूपमा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूपमा 'सरकार' बाट मुद्दा।
याद राख्नुहोस् कि मदुरोडाम / होल्याण्ड सबैभन्दा माथिल्लो देशमा छ जहाँ स्क्रिप्टका केटाहरू सेवा हो र यसैले नीति, कानुन, सामाजिक इञ्जिनियर। अन्वेषण आदि ठूलो प्रश्न कसरी छुटकारा पाउनबाट। लिपिका केटाहरूले निश्चित रूपमा सम्बद्ध फाईलहरूसँग आफ्नो कुञ्जी पदहरू खारेज गर्दैनन्।
22 मई 2019 मा 11: 26
नियमित मिडिया ... यदि तपाईंले मलाई उबालो दिनुहुन्छ भने!
यसबाहेक, मैले अब उनीहरूलाई पापी राजनेताका प्रमुख नेताहरू, प्रेस अधिकारीहरू (वा तिनीहरू स्क्यानरहरू हुन्?), अब लाश र अभिनेताहरू पढ्न सकेनन्। म बस आक्रामक भए! मैले वर्षौंको लागि सर्कस निकटतालाई पछ्याएको छैन, तर म कहिलेकाहीँ एक दूरीबाट हेर्न को लागी कहिलेकाहीँ मानिसहरु पठाइएका छन् हेर्नको लागि बाध्य हुन्छ।
यसैले म धेरै खुसी छु कि तपाईं आफ्नो जीवन बलिदान गर्दै हुनुहुन्छ ... किनभने त्यो ठूलो घडीमा झुन्ड्याइएको छ।
मलाई आश्चर्य छ कि कति पाठकहरू वास्तवमा तपाईंको जीवनका लागि के परिणामहरू पाईन्छ भनेर थाहा पाउँछन्। अधिकांश मानिसहरू पहिले नै दबाइ गर्छन् जब उनीहरूको नियमित जीवन सम्झौता हुन्छ ... उनीहरूको जीवनको मार्गमा सानो टक्कर। उनी अर्को पटक यो टक्कर सिक्न लाइनमा हिँड्न वा वर्तमानमा तैरने छ। म अझै पनि आशा गर्छु कि मानिसहरूले तपाईंलाई पैसा हस्तान्तरण गर्न समस्या लिनेछन्, भले यो एक्लो यूरो मात्र हो। त्यो एक यूरो पनि सहयोग गर्दछ!
22 मई 2019 मा 16: 35
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी छिन्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
« विल्सन बोल्डविजिनसँग टेलिफोन टेलिभिजन डे डेग्राग्राफबाट: साजिश सिद्धान्तको बारेमा श्रृंखला
मार्क रूट र थियारी बाउडेटका बीचको छलफलले सायद तपाईंले मतदान गर्नुपर्दैन »
कुल भ्रमण: 14.541.635